हाम्रो जीवन धेरै फरक व्यापक टेलिभिजन र जनसंख्याको अधिकांश आफ्नो प्रभाव गर्न झन् susceptible छन् कि बाहिरी ढाल मार्फत दुवै विज्ञापन जो प्रलोभन, मा। एक पुरानो रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था वा लागूपदार्थको लत द्वारा हैरानी गर्न सकिन्छ, र आफ्नो हातमा एउटा चुरोट आधुनिक मानिसहरूलाई एक अपरिहार्य विशेषता बनेको छ। तर केही मानिसहरू जिगर मा रक्सी को नकारात्मक पूरै प्रभाव र शरीर सोच्न।
पिउने पछि कलेजो को उपचार धेरै लामो हुनेछ। यो उद्यम को सफलता राशि र रक्सी libations को आवृत्ति मा निर्भर गर्दछ, र कुनै एक सकारात्मक परिणाम ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कलेजो पहिलो र रक्सी लिएर बाट बाउन्स हुन्छ थियो, त्यसैले, अन्य अङ्गहरू भन्दा धेरै प्रभावित छ।
पिउने पछि कलेजो को उपचार धेरै चरणमा हुनेछ। सुरु गर्न, तपाईं सम्पूर्ण शरीर नशा हटाउन आवश्यक छ। नशा को तीव्र फारममा रक्सी विषाक्तता, लोकप्रिय "hangover" को रूपमा उल्लेख गरिएको छ जो रक्सीको metabolites, को नकारात्मक प्रभाव पछि छ। एक मानिस नशा कस्तो डिग्री थियो, यो मात्र स्वास्थ्य निर्भर, तर पनि खपत रक्सीको मात्रा, साथै रक्सी पिउने पेय को संरचना गर्न व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हुनेछ। विभाजित तीन स्तरहरू छन्: भारी, मध्यम र प्रकाश।
पुरानो रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था मा सबै अंगहरु को महत्वपूर्ण हार कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सामान्य कमजोरी, आँखाको छाला र सफेद को पहेंलो हो भने, निद्रामा disturbances, घट्यो यौन कार्य एक व्यक्ति बारे जीवनको भविष्य तरिका विचार गर्नुपर्छ। यी लक्षण बारेमा कुरा गर्दै छन् रक्सी नशा एक पुरानो फारममा। यस मामला मा रक्सी उपचार पछि कलेजो डिग्री युक्त कुनै पनि पेय पूर्ण तिरस्कार सुरु गर्नुपर्छ। यो एक पुरानो मादक लागि कठिन निर्णय Suffice, तर अन्यथा तपाईं पूर्ण नशा fatalities आशा गर्न सक्छौं।
विशेष क्षति एक hangover साथ प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको कुनै पनि लागूपदार्थको हुन सक्छ। कुनै पनि चिकित्सा मानिसहरू रक्सी लिएर बाट पायो भन्दा कलेजो मा एक मजबूत प्रभाव हुन सक्छ। त्यसैले, रक्सी पछि कलेजो को उपचार यस्तो पेय पदार्थ विभिन्न constituents को शरीर देखि निकासी सुरु गर्नुपर्छ। यो उद्देश्य लागि हामी विशेष दबाइ लिन - gepaprotektory। यी लागूऔषधको कार्य रक्सी र कक्षहरूको पूर्ण सफाई पछि कलेजो को बहाली उद्देश्य छ। सबै भन्दा साधारण र सिद्ध दबाइ छ Essentiale गुण।
जिगर कसरी पुनर्स्थापना रक्सी पिउने पछि? विशेष लागूपदार्थ प्राप्त गर्न र थप कलेजो र सारा पाचन प्रणालीको सही कामकाज स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ जो आहार, संगठित गर्नुपर्छ। यसलाई पूर्ण, भुटेको र फैटी खाद्य पदार्थ त्याग्न धेरै ताजा तरकारी, सकेसम्म जामुन र फल खान आवश्यक छ। यो ताजा हावा मा धेरै समय खर्च लायक छ र सरल व्यायाम गर्छन्। यो ग्याँस बिना प्राथमिकताको, सफा र ताजा पानी प्रयोग बढाउन आवश्यक छ। खनिज पानी अत्यधिक प्रयोग आवश्यक यो रक्तचाप, adversely स्वास्थ्य असर गर्न सक्छ, जो बढ्छ देखि छ।
दबाइ उपचार बाहेक, तपाईं परम्परागत चिकित्सा को सल्लाह प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
· राम्रो मद्दत शुद्ध जिगर र लसुन चुकंदर kvass।
रगत प्रवाह सुधार प्रमाणित · हालतमा माथि वार्मिंग र compresses मकै, जैतून वा अरंडी तेल छ।
· आवश्यक छ भने, एक छोटो समय मा कलेजो शुद्ध, तपाईं हर्बल चाय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बनाउनको लागि, तपाईं जडीबुटी centaury र wormwood एक चम्चा, र चार चम्मच लिनु आवश्यक thyme creeping। milled संग्रह को एक चमचा2घण्टा भन्दा कुनै कम whereupon, उम्लिरहेको पानी एक कप भर्न आवश्यक छ। प्रत्येक भोजन अघि जलसेक एक चमचा लिनुहोस्।
मिथक र वास्तविकता: पिउने रोक्न रक्सी न पीने वाला कसरी बनाउने
वयस्क मा Dacryocystitis: उपचार, चित्र, कारणहरू
बाँझोपन को उपचार
कोका, डरलाग्दो र निराशा को रगतले के। यो यस्तो अवस्थामा खतरनाक छ?
वयस्क मा umbilical हर्निया: कसरी गम्भीर यो छ
Gastritis को मुख्य लक्षण
चीनी को सहस्र इतिहास, उत्पादन जो बिना हामी के गर्न सक्दैन
कसरी अनि अनि के कुरामा घर मा अनिन्द्राको उपचार गर्ने गर्दछ। महिलाहरु मा अनिवार्य कसरी उपचार गर्ने, पुरुषहरुमा, रजोनिवृत्तिमा, वृद्ध उमेरमा
पूर्णतया आफ्नो बच्चाहरु विकास गर्न एक तरिका रूपमा वसन्त बारेमा पहेली
Lermontov चित्रकला एम यू Lermontov ग्राफिक सम्पदा
Cherepovets को उडानहरु। प्रत्येक पर्यटक हेर्नका लागि उडानहरू
उद्घोषक Kirillov इगोर Leonidovich: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
विद्यार्थीलाई को विशेषता, व्यवहार कसरी आयोजित छ?
एक मित्रको लागि घर: कसरी राम्ररी स्थान तयार गर्न र जर्मन गोठालोको लागि बूथको आकार छनौट गर्नुहोस्
"द Witcher 3": खण्डलाई। "ग्राफ Reuven को खजाने" कथा खोज
क्यासिनो "ज्वालामुखी"। आफ्नो ब्राउजर देखि विज्ञापन कसरी हटाउने?
सानो यात्रा: लन्डन